Taxanaha YPG bifbaafka Cadaadis qalajiyaha - Shiinaha Changzhou Daming Pharmaceutical Qalabka
Description dareere ama paste wax ceeriin waxaa lagu buufiyaa dhibcood dareere mini by atomizer u riixriixan oo barbaro gargaar ka cadaadiska ama bamka diaphragm, oo si deg deg ah qalajinta marayo is-dhaafsiga kulaylka. (10-90 sec) ee la soo dhaafay, budo ama yar granule la dhammeeyo. Features 1. xawaaraha qallajinta waa si dhakhso ah oo haboon qalajinta wax dareen kaamerada gaar ahaan. 2. Shayga la dhammeeyayna waa granule kubad la size direyska. Its isbeddello iyo milmi waa wanaagsan yihiin. khayroon daahirnimo ee wax soo saarka waa heer sare ah oo ay adinba ...
Qoraalkani wuxuu ku dareere ama paste ceeriin waxaa lagu buufiyaa dhibcood dareere mini by atomizer u riixriixan oo barbaro gargaar ka cadaadiska ama bamka diaphragm, oo si deg deg ah qalajinta marayo is-dhaafsiga kulaylka. (10-90 sec) ee la soo dhaafay, budo ama yar granule la dhammeeyo.
1. xawaaraha qallajinta waa si dhakhso ah oo haboon qalajinta wax dareen kaamerada gaar ahaan.
2. Shayga la dhammeeyayna waa granule kubad la size direyska. Its isbeddello iyo milmi waa wanaagsan yihiin. khayroon daahirnimo ee wax soo saarka waa heer sare ah oo ay tayo wanaagsan yahay.
3. Waxaa dalbatay baaxadda, iriddu waa weyn. Sida laga soo xigtay dabeecadaha wax cayriin, waxa ay isticmaali kartaa hawada kulul ay u qalalaan iyo sidoo kale isticmaali kartaa hawada qabow si Iniinyada yaryar. Waxay leedahay waafajinta xoog leh alaabta ceeriin.
4. Its hawlgalka waa mid fudud iyo mid deggan, ay gacanta ku hayso waa mid fudud oo sahlan, sahlan in ay ogaadaan hawlgalka automatic.
Inta biyo la uumibixiyey
size Guud (Ø * H)
Cadaadiska of bamka
Heerkulka hawada tubada
wax cayriin ururinta
Marka cimiladu ay tahay mid hoose ka badan 200 oo ℃, oo xuduudaheedu waa in la xisaabiyaa sida ay xaaladda ku ool ah.
+ Uumi Electric
foornada hawada Hot
1 Inta ay biyo la uumibixiyey waa la xiriira in ay caan ku wax cayriin iyo heerkulka of uumi. xuduudaheedu ku yaal miiska loo xisaabinayaa 150-160 ℃
2 Customer dooran kartaa hab ka duwan qalajiyo sida: uumi hadda, uumi countercurrent iyo budada laabtay qalajiyo si loo buuxiyo shuruudaha ka mid ah wax soo saarka.
3 sawir shaxda socodka waa kaliya show, macaamiisha soo qaado yaabaa subassembly sida ay u baahan yihiin.
Waa lagu dabaqi karo ee cuntooyinka, dawooyinka, warshadaha kiimikada, dyestuff, dhoobada, lagmamaarmaanna, warshadaha caag ah iyo wixii la mid ah.
: Previous Taxanaha XSG qoqobada Flash qalajiyaha
Next: YZG, FZG Taxanaha qalajiyaha Vacuum
Qaybin Buufiyo qalajiyaha
Centrifuging High-Speed ​​Oo ku xereen ka qalleyl
Qalleyl bifbaafka Warshadaha
Industry Machine qallajinta Waayo Chemical Buufiyo qalajiyaha
bifbaafka Lab qalajiyaha
Milk Machine qallajinta bifbaafka
Cadaadiska xereen muddo gab
Buufiyo muddo gab
Buufiyo qalajiyaha Machine
Buufin qallajinta Machine
Buufin Nooca qalajiyaha
Zpg Buufiyo qalajiyaha Waayo dhegdheg Waxyaabaha
CT, CT-C Hot-hawada wareegaya qallajinta foornada
SERIES qalajiyaha FOORNADA PLG joogtada saxan qalajiyaha
ZKG qaadin Vacuum qalajiyaha